लक्ष्मी बैंकको ८.५% ब्याजदरको ऋणपत्रमा आवेदन दिने आज अन्तिम दिन
साउन ५, काठमाडौं । असार २८ गतेदेखि निष्कासन तथा विक्री खुला भएको लक्ष्मी बैंक लिमिटेडको ऋणपत्रमा आवेदन दिने आज (मंगलवार) अन्तिम दिन रहेको छ । वार्षिक साढे ८ प्रतिशत ब्याजदरको उक्त ऋणपत्रमा आज बैंकिङ समयसम्म आवेदन दिन सकिनेछ ।
बैंकले प्रतिऋणपत्र रू. १ हजार अंकित दरको ‘८.५% लक्ष्मी बैंक डिबेन्चर २०८८’ नामको १० वर्षे अवधिको रू. २ अर्ब बराबरको २० लाख कित्ता ऋणपत्र बैंकले विक्री गरेको हो ।
कुल कित्तामध्ये रू. ८० करोड बराबरको ८ लाख कित्ता सर्वसाधारणमा विक्री गर्नेछ भने बाँकी रू. १ अर्ब २० करोड बराबरको १२ लाख कित्ता भने बैंक आफैले व्यक्तिगत तवरबाट विभिन्न संघसंस्थाहरुलाई विक्री गर्नेछ ।
बैंकको यो ऋणपत्रलाई इक्रा नेपालले मध्यम कर्जा जोखिमको संकेत गर्ने ‘इक्राएनपी आईआर त्रिपल बी प्लस’ रेटिङ प्रदान गरेको छ । यो रेटिङले बैंक समयमै वित्तीय दायित्व पूरा गर्ने सम्बन्धमा मध्ययम सुरक्षित अवस्थामा रहेको समेत संकेत गर्दछ ।
यो ऋणपत्र खरीद गर्न चाहनेहरुले न्यूनतम २५ कित्तादेखि अधिकतम १ लाख कित्तासम्म आवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ । शेयर खरीदका लागि विक्री प्रबन्धक सिभिल क्यापिटल मार्केट लिमिटेडसँगै आस्बा सेवामा सहभागी सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्था र तीनका शाखा कार्यालयमार्फत आवेदन दिन सकिनेछ ।
जीवन विकास लघुवित्तको आईपीओ डिम्याट खातामा, कति पाउला त ओपन रेञ्ज ?[२०७८ सावन, १२]